बडिगाड–३ को दुर्गमा सिसाखानीमा बस पुग्यो : स्थानीयले भने, समृद्धिको ढोका खुल्यो !
November 12, 2020 November 12, 2020 chothale
तिलक मगर, २७ कार्तिक बडिगाड । पश्चिम बडिगाडको दुर्गम वडा मध्यको ३ नं वडा सिसाखानीमा पहिलोपटक बस पुगेको छ । गत कार्तिक २४ गते पहिलोपटक गाउँमा बस पुगेपछि स्थानीयले समृद्धिको ढोका खुलेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘बस पुग्दा समृद्धिको ढोका खुल्यो, अब अन्य कुराको पनि विकास हुन्छ,’ स्थानिय झग बहादुर थापाले भन्नुभयो, ‘पहिलोपटक गाउँमा बस देख्दा खुसीले गदगद भएको छु ।” बस सेवा सुरु भएपछि अब अन्य विकासले पनि फड्को मार्नेमा उहाँ विस्वस्त रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । थापा जस्तै साबिक सिसाखानी गा.बि.स. वडा नं १ निवासी ७५ बर्षिय देउमाया घर्तिले पनि बुढेसकालमा बस…
समाचारसिसाखानीLeaveacomment
एक जो’डि जं’गल मा ए’स्तो कार्या ग’र्दा ग’र्दै प’क्राउ ! भिडियो भयो भा’ईरल,,, कृपया हेर्न नछुटाउनु होल (भिडियो सहित)
काठमान्डौँ । उनको प्रेमको नशा लागेर म कसरी ढले भन्ने कुरा आज आएर सम्झिदा पनि उत्तिक्कै आनन्द लाग्छ । उनि छैनन् बस छ त केवल उनको स्पर्श, उनको सुगन्ध, उनको कल्पना, उनको याद र उनको सपना मात्र । त्यो एक रात अनि एउटाको साथ, पुरै जिन्दगी पलभरमै जिएको जस्तो मेरो आभास, सायद उनको पनि । फेसबुकले सुरु गराएको हाम्रो परिचय बिस्तारै सामिप्यतातर्फ लम्किदा लम्किदै उनि मेरो र म उनको भइसकिएको थियो । उनका तस्विर र स्टाटसहरु निक्कै भलादमी, अनि कुरा गर्ने तरिका पनि । माघ महिना, तराईको चिसो, एउटा सानो…
श्रीमानलाई देखाउनकै लागि भएपनी अर्को बिहे गर्न चाहन्छु
November 12, 2020 chothale
यो दुख हो आफ्नै श्रीमानबाट धोक खाएकी एक चेलीको । म नेपालमा एक निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षिका थिएँ । श्रीमान् पनि एक उच्च माध्यमिक विद्यालय मा पढाउनुहुन्थ्यो । हामी दुई श्रीमान् श्रीमती हाम्रा दुई छोराछोरी सानो सुखी परिवार । काठमाडौँमा एउटा पुस्तेनी घर थियो । हाम्रो भागमा तीन कोठा लाग्यो । हामीलाई बस्न तीन कोठा नै हामीलाई प्रर्याप्त थियो । घर भाडा तिर्नु नपर्नेभएकाले हामी दुई बूढाबूढीको कमाइले हामीलाई छेलोखेलो थियो । एक दिन मेरो श्रीमानले केके सुनेर आउनुभयो, अनायस नै राती इजरायलको कुरा निकाल्नुभयो । त्यो दिनदेखि त मेरा…